နောက်ခံလူ ဒီဂျန်လိုဗရန်ကို လီဗာပူးလ်ရောင်းထုတ်သင့်ရဲ့လား? - Sports Gabar
နောက်ခံလူ ဒီဂျန်လိုဗရန်ကို လီဗာပူးလ်ရောင်းထုတ်သင့်ရဲ့လား?
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက လီဗာပူးလ်နောက်ခံလူ ဒီဂျန်လိုဗရန်ကို စီးရီးအေကလပ် အေစီမီလန်အသင်းက အလေးအနက်ထား ချိတ်ဆက်လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တစ်ချို့က အသင်းအနေနဲ့ အေစီမီလန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံစဉ်းစားပြီး လိုဗရန်ကို ရောင်းထုတ်စေချင်နေကြပါတယ်။
အသက် (၂၉)နှစ် အရွယ် ခရိုအေးရှားလက်ရွေးစင် ဗဟိုနောက်ခံကစားသမား လိုဗရန်ဟာ (၂၀၁၄)ခုနှစ်မှာ ဆောက်သမ်တန် အသင်းကနေ ယူရို(၂၅)သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ်မှာ (၅)နှစ်ကြာကစားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ လိုဗရန်ရဲ့ လီဗာပူးလ်ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့အတူ လိုဗရန်က တောက်ပခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ လိုဗရန်ဟာ သူခြေစွမ်းတောက်ပနေခဲ့ချိန်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ရော၊ ခရိုအေးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပါ ဒုတိယဆုတွေကိုသာ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း လိုဗရန်ရဲ့အခန်း ကဏ္ဍက သိပ်အရေးမပါခဲ့ပဲ ချန်ပီယံလိဂ် (၃)ပွဲသာ ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြဂျာဂင်ကလော့ကလည်း ကမ္ဘာ့ဖလားပြီးကတည်းကခြေစွမ်းကျဆင်းနေတဲ့ လိုဗရန်ထက် မာတစ်ကိုသာ ပိုမိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီး အရေးကြီး ပွဲတိုင်းအသုံးပြုနေတာကြောင့် လာမယ့်နှစ်မှာ အသက် (၃၀)ပြည့်တော့မယ့် ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် လီဗာပူးလ်လို ပွဲချိန်တစ်လျောက်လုံး ပါဝါအပြည့်သုံးကာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ကစားတက်တဲ့အသင်းမှာ အသုံးဝင်ဖို့ မသေချာတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် လီဗာပူးလ်အနေနဲ့ အေစီမီလန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံလိုက်တာကသာ အသင်းအတွက်ရော ကစားသမားအတွက်ပါ အကျိုးရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ လိုဗရန်အတွက် အနည်းဆုံး ပေါင်(၂၅)သန်းခန့်ရရင် အမြန်ဆုံးသာ ရောင်းထုတ်သင့်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
နောကျခံလူ ဒီဂနျြလိုဗရနျကို လီဗာပူးလျရောငျးထုတျသငျ့ရဲ့လား?
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက လီဗာပူးလျနောကျခံလူ ဒီဂနျြလိုဗရနျကို စီးရီးအကေလပျ အစေီမီလနျအသငျးက အလေးအနကျထား ခြိတျဆကျလာပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီး လီဗာပူးလျပရိသတျတဈခြို့က အသငျးအနနေဲ့ အစေီမီလနျရဲ့ကမျးလှမျးခကျြကို လကျခံစဉျးစားပွီး လိုဗရနျကို ရောငျးထုတျလိုကျမှာ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
အသကျ (၂၉)နှဈ အရှယျ ခရိုအေးရှားလကျရှေးစငျ ဗဟိုနောကျခံကစားသမား လိုဗရနျဟာ (၂၀၁၄)ခုနှဈမှာ ဆောကျသမျတနျ အသငျးကနေ ယူရို(၂၅)သနျးနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့သူဖွဈပွီး လီဗာပူးလျမှာ (၅)နှဈကွာကစားပေးခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ လိုဗရနျရဲ့ လီဗာပူးလျဟာ ရီးရဲလျမကျဒရဈကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့အတူ လိုဗရနျက တောကျပခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ လိုဗရနျဟာ သူခွစှေမျးတောကျပနခေဲ့ခြိနျမှာ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ရော၊ ခရိုအေးရှားလကျရှေးစငျအသငျးနဲ့ပါ ဒုတိယဆုတှကေိုသာ ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ယခုနှဈမှာတော့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗိုလျစှဲနိုငျခဲ့တယျဆိုပမေဲ့လညျး လိုဗရနျရဲ့အခနျး ကဏ်ဍက သိပျအရေးမပါခဲ့ပဲ ခနျြပီယံလိဂျ (၃)ပှဲသာ ကစားခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
နညျးပွဂြာဂငျကလော့ကလညျး ကမ်ဘာ့ဖလားပွီးကတညျးကခွစှေမျးကဆြငျးနတေဲ့ လိုဗရနျထကျ မာတဈကိုသာ ပိုမိုအခှငျ့အရေးပေးခဲ့ပွီး အရေးကွီး ပှဲတိုငျးအသုံးပွုနတောကွောငျ့ လာမယျ့နှဈမှာ အသကျ (၃၀)ပွညျ့တော့မယျ့ ကစားသမားတဈဦးအတှကျ လီဗာပူးလျလို ပှဲခြိနျတဈလြောကျလုံး ပါဝါအပွညျ့သုံးကာ အရှိနျအဟုနျနဲ့ကစားတကျတဲ့အသငျးမှာ အသုံးဝငျဖို့ မသခြောတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ လီဗာပူးလျအနနေဲ့ အစေီမီလနျရဲ့ကမျးလှမျးခကျြကို လကျခံလိုကျတာကသာ အသငျးအတှကျရော ကစားသမားအတှကျပါ အကြိုးရှိနိုငျမှာဖွဈလို့ လိုဗရနျအတှကျ အနညျးဆုံး ပေါငျ(၂၅)သနျးခနျ့ရရငျ အမွနျဆုံးသာ ရောငျးထုတျသငျ့ပါကွောငျး တငျပွလိုကျရပါတယျ။
Previous Article အာဆင်နယ်နဲ့သတင်းတွေကိုတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ကာရက်စကို
Next Article ယူ(၂၀)ကမာ့္ဘဖလားမှာ စံချိန်သစ်တင်ရမယ့် တောင်ကိုရီးယားလူငယ်ဘောလုံးအသင်း